Development Network for Immigrants ─ မြူနီစီပယ်၊ ခရိုင်(မြို့) အသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်/ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာဇယား
မြူနီစီပယ်၊ ခရိုင်(မြို့) အသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်/ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာဇယား
Date : 2016/3/9
Updated : 2017/11/15 下午 04:11:00
၁. ၀န်ဆောင်ရန်သက်ဆိုင်သူ : နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်၎င်း၏မိသားစု
၂. ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ :
(၁) တစ်ဦးချင်းကိစ္စစီမံခန့်ခွဲမှု : တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းစုံစမ်းမေးမြန်းရန်၊ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအကူအညီပေးရန်၊ နေထိုင်မှုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးခြင်း၊ မိဘကလေးအုပ်ထိန်းသင်ကြားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု၊ လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာမေးမြန်းစုံစမ်းရန်၊ စိတ်ပိုင်းခံစားမှုဆိုင်ရာထောက်ခံပေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတို့ကိုဝန်ဆောင်ပေးသည်။
(၂.) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံဝန်ဆောင်မှု-ထောက်ခံမှုတိုးတက်အဖွဲ့အစည်း : ပရော်ဖက်ရှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြံပြုဆရာ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်အား အဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သောအသိပညာသင်ယူရန် အကူအညီပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်သောလူမှုရေးကိုတည်ထောင်ပြီး အင်တာနက်ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်အတူ မိသားစုဆက်ဆံရေးကိုလည်း ထိရောက်စွာတိုးမြှင့်နိုင်ရန် အကူအညီပေးသည်။
(၃) မိသားစုပံ့ပိုးဝန်ဆောင်မှု-မိသားစုလှုပ််ရှားမှု၊ မိသားစုချစ်ကြည်ရင်းနှင်းလှုပ်ရှားမှု : လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးမှတဆင့် နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်၏သားသမီးနှင့်အခြားရွယ်တူများအကြား အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာပြီး ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံသားသစ် ပြင်ပသို့သွားရောက်ထွက်ပေါက်ရှာခွင့်နှင့် မိသားစုကြားဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရန်အထောက်အကူပေးသည်။
၃. ခရိုင်မြို့အသီးသီးမှနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ListFile size:113 KB